राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै मिलेर दुई-दुईपटक संविधानकाे हत्या गर्न खाेजेका थिए- डा. यादव - Everest Dainik - News from Nepal
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै मिलेर दुई-दुईपटक संविधानकाे हत्या गर्न खाेजेका थिए- डा. यादव
२०७८, २४ पुष शनिबार
काठमाडौ । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानकाे रक्षा गरेर लाेकतान्त्रिक समाजवादकाे बाटाेमा अघि बढ्न सबैमा अपील गरेका छन् ।
वरिष्ठ राजनीतिज्ञ चन्द्रदेव जाेशीद्वारा लिखित मार्क्सवाद र विश्व कम्युनिष्ट आन्दाेलन नामक पुस्तककाे विमाेचन गर्दै यादवले संविधानमा पटकपटक आक्रमण भएकाे बताउँदै यसकाे रक्षा गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका हुन ।
“पछिल्लाे ४ वर्षयता संविधानमा पटकपटक आक्रमण भयाे । याे एक वर्षयता त दुइदुइपटक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर नै यसकाे हत्या गर्न खाेजे ।” उनले भने, “संविधान साना त्यागले बनेकाे हाेइन, यसले संघीयता, समावेशिता र धर्म निरपेक्षताकाे ग्यारेन्टी गरेकाे छ । यसकाे रक्षा गर्नु जरुरि छ ।”
राजनीतिक दलहरुले वाद विचारधारामा अल्झिनु भन्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेकाे बाटाेमा हिंडनुपर्ने उनले बताए । “संविधानले लाेकतान्त्रिक समाजवादकाे परिकल्पना गरेकाे छ ।” उनले भने, “याे वाद त्याे वाद किन भन्नुपर्याे, नेपालकाे माैलिकतामा सामाजिक न्यायसहितकाे समाजवाद भनेर संविधानमैं लेखिऐकाे छ । यसकाे कार्यान्वयनमा लाग्नु अहिलेकाे मुख्य जिम्मेवारी हाे ।”
नेता जाेशीद्वारा लेखिएकाे पुस्तकामाथि राजनीतिक अर्थशास्त्री हरि राेका, राजनीतिक विश्लेषक डा.सुरेन्द्र केसी, राजनीतिशास्त्री इन्द्र अधिकारी लगायतले समीक्षा गरेकका थिए । पुस्तकलाइ इण्डिगाे इन प्रकाशनले बजारमा ल्याएकाे हाे । कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधव नेपालले समेत सम्बाेधन गरेका थिए ।